Mweghachi! | Martech Zone
Sunday, November 26, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Isi okwu ol na-amalite inweta obere ihe na-agwụ ike maka m, yabụ, ekpebiri m ịkpachara anya na ikuku ma wee sie ofe ahụ. Amalitere m na Ntughari beta isiokwu na tweaked ya kpam kpam. Ọbụna m gbakwunyere ogwe Google Video, ọ na-eme nyocha nke usoro mkpado sitere na Google Video. You'll ga - ahụ ọkacha mmasị m n’ebe ahụ - Seth Godin na Tom Peters, yana aha njirimara ndị ọzọ na ntanetị 2.0, njikarịcha njin ọchụchọ, ịntanetị, wdg.
Isi okwu a masịrị m n'ihi na ọ na-ebute peeji ahụ ụzọ. Kama nchịkọta menu (nke na ọ dịghị onye jiri ya mee ihe), isiokwu a na-eri ala na ala peeji nke ụlọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye ọbịa bịara ebe a na mgbe ọ gụsịrị post ahụ 'nkenke' ma ha enweghị mmasị… Enwere m posts 'metụtara' n'akụkụ. Ikekwe enwere isiokwu n’ebe ahụ ha chọrọ ịgụ.
Emere m obere tweaks dị jụụ na isiokwu ahụ. Squible bụ obosara atọrọ, yabụ m gbanwere ụdị niile maka obosara na-agbanwe agbanwe. Squible na-ejedebe ihe odide na ibe ihu (ma ọ bụrụ na ịchọrọ) ma na-ebipụ ọdịnaya ahụ n'etiti okwu ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ oke. Emeziri m ọrụ ahụ iji bepụ ya na oghere ikpeazụ tupu njedebe agwa ya.
Ma n'ezie, enwere ndị na-ere ọkụ ọkụ! Achọrọ m ịbụ ntakịrị ihe na-atọ ụtọ mgbe ahụ oyi na-acha anụnụ anụnụ nke isiokwu m gara aga. Anyị ga-ahụ ihe na-eme. Enwere m obere nchegbu na isiokwu a na-eji ntakịrị Ajax, na-enye ọdịnaya dị na ofufe. Anyị ga-ahụ ihe na-eme nsonaazụ ọchụchọ m na saịtị ọhụrụ. Olileanya, ihe omimi miri emi metụtara ga-eme ka SEO dị mma (Search Engine Optimization).
More na-abịa! Ma enwere m olileanya na ọ masịrị gị!
Tags: blogdouglas karrna mmetụta na akpaakawebụsaịtị
Nov 26, 2006 na 10:12 PM
A ọhụrụ anya! Isi oroma oroma na-enye mmetụta ụtụtụ ụtụtụ, dị ezigbo ụtọ.
Nov 27, 2006 na 9:35 PM
Chaị! Ezi ọganihu, m ga-ekwu. Dị ọcha ma dị mfe. Enweghị mgbasa ozi?
Nov 28, 2006 na 10:15 AM
Ọmarịcha agba - dị ike nke ukwuu. Mana m ga-ekwupụta na m na-atụ uche obere Douglas n'elu peeji a - ọ nyere mmetụ ahụ dị mma.